Kheyre oo ballanqaad cajiiba u sameeyay dhalinyarada dalka - Caasimada Online
Home Warar Kheyre oo ballanqaad cajiiba u sameeyay dhalinyarada dalka
Kheyre oo ballanqaad cajiiba u sameeyay dhalinyarada dalka
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’isul wasaaraha xukuumadda Somalia Xasan Kheyre ayaa sheegay in Xukuumadiisa ay ka shaqeyneyso sida camal loogu abuuri lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed.
Kheyre ayaa sheegay in Xukuumadiis ay dajineyso qorsho fog oo shaqooyin kala ceyn ah loogu abuurayo dhalinyarada, waxa uuna meesha ka saaray in Xukuumada ay gabtay howlaheeda.
Kheyre waxa uu tilmaamay in si gaara ay uga wada hadleen sidii fursado shaqo ay u heli lahaayen dhalinyarada waxa uuna arrin laga naxo ku tilmaamay in kumanaan kun oo shacaba ay xiligaani ku nool yihiin shaqo la’aan.
Waxa uu tilmaamay in xukuumadiisa ay xoogga saari doonto sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ay dalkooda uga shaqeysan lahaayeen, isla markaana uga maarmi lahaayeen dalalka shisheeye.
Hay’adaha kala duwan ee taageera DFS ayuu sheegay inay kala hadli doonaan sidii ay dib ugu dhisi lahaayeen xarumaha waaweyn ee dalka sida warshadihii dalka uu lahaa, taasi oo soo dedejin karta shaqo ay helaan dhallinyarada.
Haddalka Kheyre ayaa kusoo beegmaaya xili dhawaan uu Madaxweynaha Somalia ballanqaaday shaqo abuur uu u sameyn doono dhalinyarta.